IMacOS ePhakamileyo yeSierra inokuphinda ivuselele iiMacs ezindala | Ndisuka mac
IMacOS ePhakamileyo yeSierra inokwenza iiMacs ezindala zivuseleleke
IMacOS ePhakamileyo yeSierra iya kunika oomatshini abadala ithuba elitsha Logama nje sineyunithi yememori ye-SSD okanye siyayixabisa ukuyitshintsha. Iingcali ezininzi, kubandakanya neetekhnoloji zeApple, ziqhuba iimvavanyo ezahlukeneyo ngeeMacs ezindala ezinee-SSD zokuqala kwaye ngaxeshanye kunye nee-SSD zesizukulwane sakutshanje, esaziwa njengeNVMe.
Inyani yile yokuba kukho iiMacs ezine-3,4,5 okanye iminyaka engaphezulu egcina inqanaba eliphezulu lokusebenza, enkosi kumqhubekekisi kunye nokonyuka okuthe ngqo kwi-RAM. Indawo yokuphela kwebhotile ikwiidiski zememori.Ke ngoko, utshintsho kula maqela kwidiski ye-SSD xa kuthelekiswa nendabuko, lutshintsho olungenantsingiselo. Kodwa ukuba siyongeza, iMacOS ePhakamileyo yeSierra, kunye netekhnoloji yefayile ye-APFS iya kuvumela ezi khompyuter ukuba zibonelele ngokusebenza okuphezulu ngexesha lokwazisa kwabo kwintengiso.
Oku kuboniswa ngedatha. UGilles Aurejac, ingcali yeziko leenkonzo zika-Apple, ivavanya ii-NVMe SSDs ezintsha ezifumaneka kwiimveliso zeSamsung kunye neKingston, ezineelaptops ezivumela ukutshintshwa. Kwakhona uvavanya ngeMacOS ePhakamileyo yeSierra.
Olunye lovavanyo lwenziwa ngefayile ye- Ngo-13 iMacBook Pro 2013 ″. Ngekhompyuter yentsusa, isantya sememori sasifundwa ngama-630 MB / s kunye nokubhala okungama-323 MB / s. Emva koko, nditshintsha imemori ye-Samsung I-NVIDIA 960 EVO NVMe 500, Ixabiso layo lijikeleze i- € 230. Iziphumo zi-1,5 GB / s ezifundwayo kunye ne-1,4 GB / s yokubhala. Ukujonga kwakhona, iiProses zeMacBook zamva nje ezinikezelwa yinkampani zibonelela ngesantya sokufunda se-3 GB / s kwaye kwimeko yokubhala ukuya kuthi ga kwi-2,3 GB.
Ke ngoko, ukuba asikho kwimeko yokutshintsha izixhobo okanye sifuna ukuphucula loo Mac sinayo njengekhompyuter yesibini endlwini, lutyalomali oluhle kakhulu, ngakumbi ukuba esi sixhobo sixhasa iMacOS ePhakamileyo yeSierra.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » IMacOS ePhakamileyo yeSierra inokwenza iiMacs ezindala zivuseleleke
Nabani na oye wavavanya i-beta kwiikhompyuter ezingasekelwanga? Ndine-core2duo MBP ene-ssd kwaye nge-caiptan isebenza kakuhle
UManuel Latorre sitsho
Enkosi mhlobo ungalunga
Phendula uManuel Latorre
Kuba ndineMBP Mid Mid 2012 ndibeke i-SSD 2 kwiminyaka eyadlulayo iyabhabha…. ewe, ine-16GB ye-RAM.
Iimuvi ze-4K ngoku ziyafumaneka ngeTunes
Iapile kunye nabathengisi kungquzulwano kulawulo lwecookie kwi-Safari entsha kwi-MacOS High Sierra